Raha mbola eto an-tany ihany no ahafahan'ny voa maniry sy mamoa ny voany rehefa mandeha ny fotoana. Amin'ny maha-vatana fotsiny dia afaka mahatsiaro ny akanjo tonta izay hitoerany tsy mety maty.
Moa tsy niditra tamin'ny làlana mankany amin'ny mazava va ianao? Dia ho tonga izay mety handroso mandroso, mandra-paha-tsy misy na inona na inona eo alohan'ny fahamarinana sy ianao.
Vol. 2 OKTOBRA, 1905. Tsia
INDRINDRA ara-pinoana, amin'ny haingam-pitenenana, na fihetseham-po miafina, dia nino sy naheverin'ny sasany izay nanaitra sy manaitaitra azy ireo, fa ny fanahy tsirairay dia tsy maintsy mitady ny vadiny ao amin'ny firaisana mifanohitra raha toa ka tafita amin'ny fahombiazana izany. izao tontolo izao, na manao fandrosoana ara-panahy. Ankoatr'izay, noho ny antony ilazana izany, ny fanahy dia avy amin'ny niandohan'izany, fa noho ny ota taloha nizara ho lahy sy vavy, ka noho izany ny fahantrana sy ny faniriana ny fiainan'ny olombelona misaraka. Izany hoe, aorian'ny fandehanana eto amin'izao tontolo izao, amin'ny alàlan'ny fanalavana ny fahotany, dia hahita ny "vady" na "antsasaky ny hafa" ny fanahy ary avy eo dia hiditra ao anatin'io vanim-pifaliana tonga lafatra io raha tsy fantatry ny fanahy amin'ny fanahy. Betsaka ny fiovana mahafinaritra ny fiheverana kambana-fanahy. Izy io dia hamela ny kilalao feno amin'ny poetika tononkalo, ary hanolotra ny tenany amin'ny antokom-piraisana miady; fa fotopampianarana izay mitondra vokatra tsy sambatra. Raha misaintsaina izany dia hahatonga ny saina hitady na haniriana "mpivady fanahy", ary, marina amin'ny lalàn'ny famatsiana sy ny fangatahana dia hisy ho avy. Saingy, ny "vady" dia mety efa manana fatoram-pianakaviana izay tokony handrara izany finoana izany. Indraindray, olona roa izay nifanaraka tsara dia samy mifanaraka amin'ny hevitry ny fihetseham-poko, ary milaza fa tsy maintsy natao ho an'ny iray hafa ny tsirairay ary raha kambana ny fanahiny dia tsy maintsy anjarany ihany koa izy ireo. Rehefa tratran'ny raharaham-baraka ity dingana finoana ity dia azo antoka fa hanaraka izany. Avy eo ny "mpifahavalo" dia manambara fa diso ny heviny ary enjehina ary miaina ao anatin'ny toe-javatra diso isika rehetra. Saingy maro, izay tamin'ny voalohany dia nahita fa nahita "mpivady" izy ireo no nahatonga ny faniriana taty aoriana mba tsy hananany. Ny foto-pinoana antsoina hoe mpivady ara-panahy dia anarana hafa ilazana izany.
Ity foto-pinoana momba ny kambana ity dia iray amin'ireo fampianarana ratsy indrindra amin'ny vanim-potoana rehetra. Izy io dia manandrana mampidina ny fanahy ho an'ny firaisana ara-nofo, manitsakitsaka ny fatoram-pianakaviana mba hanomezana fahafaham-po ny biby, ary hanambatra ny faniriana ara-nofo eo ambanin'ny akanjo ara-panahy.
Ny kambana kambana dia hevitra diso nalaina avy tamin'ny tantaran'ny goavambe taloha. Nilaza tamin'izy ireo fa, tany am-boalohany, ny olombelona dia tsy mitovy amin'ny vatana sy vavy - fa ny olombelona tamin'izany fotoana izany dia samy manana ny firaisana ara-nofo ao anaty olombelona iray, fa ireo andriamanitra ireo dia nanana fahefana sahala amin'ireo andriamanitra; fa taorian'ny vanim-potoana tsy azo isaina dia lasa lehilahy sy vehivavy tamin'ny androntsika ny hazakazaka lahy ary lasa nizara roa izy ireo, very ny fahefana izay azy ireo taloha.
Ny antitra taloha dia nanoratra ny tantarany tamin'ny lasa, ireo izay mety hamaky izany amin'ny angano sy ny tandindona natolotra.
Fa tsara kokoa noho ny tantara na angano, ny vatan'olombelona dia miaro ny zava-mitranga amin'ny fotoana rehetra.
Ny vatan'olombelona ao amin'ny fivoarany dia manambara ary manambara ireo rakitsoratra taloha.
Hatramin'ny niandohan'ny olombelona ka hatramin'izao, ny tantarany dia nasongadin'ny famolavola ny olona tsirairay. Ary ambonin'izany, ny faminaniana momba ny ho avy dia ao amin'ny fampandrosoana hatramin'ny taloha.
Ny fampandrosoana ny embryological dia mampiseho fa amin'ny ambaratonga voalohany dia tsy misy firaisana ny foetus; taty aoriana, na dia tsy hita miharihary aza ny firaisana ara-nofo, fa raha ny tena izy dia mitambatra; mbola aoriana kely vao azo lazaina fa vehivavy. Lasa lahy raha tsy eo amin'ny fivoarany farany. Ny anatomy koa dia mampiseho ity tranga manan-danja ity: fa aorian'ny fampivoarana tanteraka ny firaisana ara-nofo dia mbola tazonina ao amin'ny vatana tsirairay ny taova rudimentary manokana amin'ny mifanohitra. Azo inoana fa amin'ny fivoaran'ny olombelona manambady roa no nisehoan'ny vehivavy voalohany.
Ny vatan'olombelona dia fanehoana sy fahatapahan'ireo dingana efatra miavaka amin'ny evolisiona, izay ny dingana tsirairay dia mirakitra vanim-potoana lehibe. Ny lafiny ara-batana amin'ireo dingana ireo dia aseho ankehitriny amin'ny tontolon'ny mineraly, legioma, biby ary ny tontolon'ny olombelona. Ao amin'ny mineraly, ny endrika voalohany dia manomboka miseho ao amin'ny tahiry voalohany, fa taty aoriana, amin'ny fiasana ao anatiny, ary amin'ny alàlan'ny asan'ny magnetic, izay fantatry ny siansa ho "fitambaran'ny simika, ny endriky ny kristaly tonga lafatra. Miaraka amin'ny endrika voalohany amin'ny endrika mineraly, manomboka miseho amin'ny fiainana ny fiainana ary hita amin'ny famantarana voalohany ny fiainana zavamaniry, fa taty aoriana, miaraka amin'ny herin'ny magnetic ary amin'ny alàlan'ny fitomboana sy fanitarana avy ao anaty zavamaniry, ny fiainana -Cancol dia novolavolaina ary napetraka. Ity dingana ity dia fantatra amin'ny biolojika sy ny toe-batana toy ny fizotry ny «budding». Mandritra ny fitomboan'ny fiainana zavamaniry dia ny fisian'ny faniriana aloha no aharihary amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny maha-olona ao anaty sela-fiainana, avy ao aorian'izay, amin'ny fanitarana ny fiainana sy ny fanintonana ny faniriana, ny sela-biby dia mamorona ary mizara ho roa mitovy ireo sela, samy manana toetra mitovy. Ity dingana fahatelo ity dia antsoina hoe "fizarazarana sela." Ao amin'ny fivoaran'ny dingana fahatelo izao, ny sela-biby dia mampiseho firaisana ary mitaky ny firaisana amin'ny sela roa mifanohitra amin'ny firaisana amin'ny fampielezana, satria tsy afaka manohy ny karazana amin'ny "fizarazarana" irery ihany izy io. Miaraka amin'ny fivoaran'ny firaisana ara-nofo amin'ny biby, manomboka ny dingana fahefatra amin'ny olombelona rehefa miseho ny mikraoba mihanaka ao anaty sela-biby, ary ampitaina amin'ny endrik'olombelona, ​​izay novolavolain'ny fatiantoka an-tsaina ihany.
Ireo dingana efatra ireo dia maneho ny fivoaran'ny vatana izay ananantsika ankehitriny. Ny vatan'ny vanim-potoana lehibe voalohany dia somary nisy endrika kristaly ary kely kokoa noho ny tara-masoandro. Tao anatin'ny tontolon'ny kristaly no tsara indrindra ho an'ny olona ho avy. Ny olona tamin'ity foko ity dia ampy ho azy ireo. Tsy maty izy ireo, ary tsy hitsahatra na oviana na oviana raha mbola maharitra izao rehetra izao, satria izy ireo no maneho ny endrika mety aorian'izay nisy ary hatsangana ny endriny rehetra. Ny fiandohan'ny vanim-potoana faharoa dia voamariky ny maha-kristaly toy ny kristaly tamin'ny vanim-potoana voalohany namoaka azy avy tamin'ny ova-mavo na ny atody; Tao anatin'ilay endrika toy ny atody dia misy ny mikravelon'ny fiainana izay nantsoin'ny fofonain'ny habakabaka, ary ny endrika toy ny atody, dia nanentana zavatra tsotra hambara. Ity hazakazaka faharoa ity dia maharitra mandrakizay amin'ny alàlan'ny famolavolana endrika mitovy amin'ny endriny manokana, fa ny fahazoana endriny toy ny faribolana dia toa endrika boribory iray izay toa zoro mahitsy. Samy nifangaro tamin'ny tsirairay izy ireo ary nanjavona tao amin'ilay endrika napetrany. Ny vanim-potoana fahatelo dia nanomboka tamin'ireo endrika atody izay namboarin'ny hazakazaka tamin'ny vanim-potoana faharoa. Ny endrika toy ny atody namboarina teo amoron'ny lozisialy dia lehilahy sy vehivavy roa. * Nohazaina tao amin'ity hazakazaka roa lahy ity ny faniriana ary ny sasany nanomboka nanaisotra ny hery namoronana azy ireo. . Avy amin'ny herin'ny fiainana sy ny endriny ao anatiny, manome hery, ary, avy amin'ny endrika olombelona ankehitriny ny umbilicus, endrika vava iray izay mivoaka tsikelikely sy raikitra ho endrika mitovy amin'ny iray izay namoahany azy. Vitsy ihany no mba nanaovana izany, fa tamin'ny farany, ny hazakazaka dia nanaraka ny ohatra nataon'izy ireo. Ny valalabatoana toy ny kristaly dia nameno ny sasany amin'ireo izay niteraka voalohany. Ity no hazakazaka tsy manam-petra tsy manam-petra izay mijanona ho mpampianatra ny olombelona. Ny sasany maty, fa niverina indray tao amin'ny maha-progeny azy. † Ny vatana vokatr'izany dia lasa marefo sy miorim-paka kokoa ary tamin'ny fotoana voalohany dia nanjary nisy iray tamin'ny firaisana kokoa noho ny iray hafa, mandra-pahatongan'ny farany dia tsy afaka manome hery sy mamokatra intsony izy ireo. Izy irery, satria ny taova firaisana tsy nanjaka dia nanjary kely saina ary tsy dia nanonona azy. Avy eo niara-niray tamin'ny firaisana hafa izy ireo ary namorona ny hazakazaka lahy sy vavy araka ny ahafantarantsika azy ankehitriny.
Tamin'ny vanim-potoanan'ny fandrosoana, ny hazakaza-kristaly toa ny kristaly dia nanome ny fanandramana ny fivoaran'ny zavamanana izay navoakany, fa mijanona amin'ny sisa rehetra izy ireo mandra-pahatongan'ny namorona olon-droa miforona sy mivoatra amin'ny firaisana ara-nofo. Avy eo dia nanodidina ny vatan-dranomaso toa ny kristaly ary namofona tamin'ny vatana nateraky ny firaisana ara-batana. Nanomboka teo dia efa lasa ny taona, fa ny tontolon'ny kristaly kosa dia mbola nifandray tamin'ny olombelona tamin'ny alàlan'ny saina. Avy amin'izy ireo no tonga nofo, ary avy ao an-tsaina no maka sy mamerina ny endrik'olombelona. Amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny saina amin'ny vatosoa toa kristaly ny olombelona dia natao ho lasa tsy maty ara-tsaina, toy ireo olona roa lasa taloha.
Ireo zavatra rehetra ireo dia toa hafahafa ho an'ireo izay nandre azy voalohany, saingy tsy azo ampianarina izany. Ho toa tsy hafahafa raha toa ka misaintsaina sy mandalina momba ny fampandrosoana ny embryolojika sy ny fivoarana ara-batana. Rehefa mitohy ny fandinihana sy ny fisaintsainana dia ho takatra ny drafitra.
Ny siansa momba ny firaisana ara-nofo dia ny hoe mahay mamokatra vatana tonga lafatra indrindra. Ny filozofia momba ny firaisana dia ny fahafantarana ny tanjon'ny vatana sy ny fampiasana azy ireo tsara indrindra. Ny foto-pivavahan'ny firaisana dia mitarika fitiavan-dàlana mba ho tonga firaisan-tsaina.
Inona ny Zon'ny lehilahy ao amin'ny tontolo noumenal, ny firaisana ara-nofo dia izao tontolo izao miharihary. Ny firaisana ara-nofo no tena feno sy voalamina tsara, fitenenana an'ny Zaza. Ny natiora rehetra
Ny firaisana ara-nofo dia tokony ho mizana na zavamaneno izay tsy maintsy ianarana ny saina hampitovina sy handanjalanja ny tenany eto amin'ity tontolo ity, ary amin'ny alàlan'ny fomba hanoloran'ny fon'ny fiainana azy. Saingy noho ny fahatongavan-tsaina, ho lasa vatana izay manao firaisana ara-nofo, dia lasa novana ny olona tsy mahay manao firaisana ary manaitaitra ny saina. Ny mpanao jadona dia nanisy tombo-kase tamin'ny olona, ​​ary ny olona mitazona ny fahefany tahaka ny gadra vy. Nankandevo ny firaisana ary ankehitriny dia manery ny saina hanao fihetsika manohitra ny fitakian'ny saina, ary feno tanteraka ny heriny ka nampiditra an-daharana ny ady ho an'ny saina ny firazanan'olombelona ho tafika midadasika ary ny lalànan'ny vanim-potoana sy ny fotoana. tokony fehezina. Ny tsy firaharahana ireo lalàna ireo dia nilentika ambanin'ny haavon'ny biby ny firenena sy ny firazanana ary nandalo teo ambanin'ny rano tsy fahitana.
Mistery ny tsiambaratelo izay tokony hamaha ny olombelona rehetra eto amin'ity tontolo ity. Ho an'ireo mbola eo ambany fanandevozana dia tokony hijanona ho mistery hatrany ny firaisana. Ny hamaha ny zava-miafina ny firaisana dia ny fivoahana ny tena amin'ny fatorany ary ny fitarihana ny fofona fiainana amin'ny endrika avo kokoa.
Ao amin'ny mistery taloha dia voalaza fa ny neophyte dia nanomboka tamin'ny dikan'ireto teny efatra ireto: Mahafantatra, sahy, manao, mangina. Ny olona dia nanadino na very ny lalana mankany amin'ny varavaran'ny mistery. Fa angano sy tandindona foana dia vavolombelona nanatsoaka hevitra fa ny tempolin'ireo mistery dia vatan'olombelona.
Ny lehilahy na vehivavy dia antsasaky ny lehilahy fotsiny, ary ny fanambadiana no antitra indrindra amin'ny maha-olombelona antsika. Ny firaisana dia misy adidy sasany. Ny adidy voalohany sy lehibe indrindra amin'ny zanak'olombelona dia ny fanambadiana; Tsy fanambadiana fotsiny ho an'ny tsy firaharahan'ny saina, fa ny firaisana iray izay haharetan'ny olombelona sy hahavita ny hazakazaka. Ny adidy ho an'izao tontolo izao dia ny olona roa mifanohitra dia tokony mifanambatra amin'ny olona iray mba hamorona karazana tonga lafatra, izay karazana sy ray na reny ao anatiny. Ny adidin'ny tsirairay avy dia ny mahay mandanjalanja ny hafa ao anatin'ny fitsapana sy ny fikarakarana ny fiainana, satria ny toetran'ny tsirairay dia manome ny lesona ilaina indrindra hanodinana sy hanatanjahana ary hanozongozona ny toetran'ny hafa , ny tsirairay avy, toy ny hafa, ny mifanohitra na mihemotra ny toetrany manokana. Izany rehetra izany dia mihatra amin'ny lesona izay ianaran'ny olombelona ao an-tsekoly antsoina hoe an'izao tontolo izao, ary natao ho an'izay hiaina fiainana sambatra eto amin'izao tontolo izao.
Ny olana momba ny firaisana dia misy mistery lalina kokoa. Misy loza ateraky ny fandrosoana azy, noho ny mety hisian'ny tsy fahazoan-dàlana azy sy hampiasana azy ho iray amin'ireo andian-dahatsoratra ao amin'ny kambana-kambana. Ity zava-miafina ity dia ho fomba hahazoana ny tanjona masina amin'ny fanambadiana izay no lohahevitry ny asa soratra alketika, sy ny tandindon'ny Rosicrucians ary ireo filozofa amin'ny fotoana rehetra. Marina tokoa fa ao amin'ny olombelona ny lehilahy sy ny vehivavy: fa ao anatin'ny lehilahy no misy ny vehivavy, ary ao anatin'ny vehivavy no mety misy lehilahy. Ny hazakazaka voalohany voalohany, izay ny firazantsika no niafarany, dia mbola isehoan'ny olombelona tsirairay fa ny maha-Andriamanitra azy. Ny karazam-piraisan'ny razambentsika roa lahy izay tsy manambady, dia tsy maintsy mamolavola indray alohan'ny fitrandrahana masina, habe kristaly. Ity fampivoarana ity dia tsy azo atao raha tsy amin'ny fahalalana sy ny sain-tsaina, rehefa avy nianatra ny lesona ampianarin'ny vatantsika ankehitriny. Ny antony manintona ny firaisana ara-nofo ho an'ny iray dia noho ny faniriana ny fanehoana sy ny fivoaran'ny hery mifanohitra izay misy ao aminy, ary satria ny firaisana ara-nofo hafa dia fanehoana ivelany sy taratry ny faneriterena amin'ny lafiny hafa ao anatiny. Ny tena fanambadiana dia mitranga rehefa samy mahay mandanjalanja izy roa ary samy miray saina ao anatin'ny olona iray. Izany dia tsy azo atao afa-tsy taorian'ny fanandramana lava tamin'ny fotoana maro ary rehefa vita ny fanoloran-tena. Fantatry ny rehetra fa afaka mampianatra ny fiainana ara-batana, ary ho fantatry ny olona amin'ny farany fa misy zavatra tsy mahavelona ny fiainana ara-batana. Izany dia vokatry ny andaniny hafa amin'ny fikaonan'ny olona iray mba hanehoany ny tenany amin'ny tsy fahafaham-po amin'ny fiainana ara-nofo, ny faniriana anaty ao anaty firaisana amin'ny maha-Andriamanitra, amin'ny fahavononan-tena hamoy ny fiainana, raha mila, ho an'ny tsara na ny tsara ny hafa, amin'ny faniriana ara-panahy tsy tapaka, ary ny fiakaran'ny tena fitiavana izay manalavitra ny zavatra ara-nofo. Ny lafiny anatiny dia tsy hiseho amin'ny endriny mahafinaritra izay mety hitranga miaraka amin'ny fampanantena sy fifaninanana. Ny fahitana izany dia tokony havoaka tsy misy parley. Ny fahatsapana ho an'ny olon-kafa dia mifindra amin'ny maha-ao anaty, izay mamaly izany rehefa voaporofo ny fanoloran-tena. Satria omena eritreritra sy miasa ny fifampiraharahana tsy misy dikany, dia toy izany ihany ny fihetsik'ilay hafa ao anatiny (tsy misy) akory. Rehefa vita izany dia vita ny olana momba ny firaisana. Io lehilahy izay tanterahana io dia tsy mila miditra amin'ny firaisana ara-nofo intsony satria ny hery miteraka ankehitriny izay tafasaraka dia ampifangaroina ho olona iray izay afaka manome hery sy mamorona vatana, raha toa ka "sitrapo" izany, toy ny natao tamin'ny hazakazaka. tamin'ny vanim-potoana fahatelo, izay izany no prototype.
Isan'ireo fanovana ara-batana izay talohan'ny fanambadiana marina ity, dia ny fifohazana ho an'ny fiainan'ny taova atrophied ankehitriny (toy ny glandre pineale) ao amin'ny efitranon'ny ati-doha ankehitriny.
Avelao ny saina sy ny fo hoentina mankamin'ny fahatsiarovan-tena tsy mitohy ary tsy misy tanjona hafa, amin'ny farany. Ny fahazoana ny toe-piainanay ankehitriny dia ilaina amin'ny fananganana vatana hafa. Mety mbola ilaina ny fahanterana amin'ny fananganana vatana hafa izay haneho tsara sy handraisana ny fahatsiarovan-tena. Fohy ny fotoana ary mazava ny lalana raha toa ka fahatsiarovan-tena fa tsy vatana, dia katsahintsika. Avy eo, manome ny vatana rehetra sy ny zava-drehetra ny lanjany feno ho an'ny tanjona hotompoina isika. Fa ny vatana rehetra dia asiana tombony ho an'ny mahasoa azy amin'ny fahatsiarovan-tena, fa tsy amin'ny vatany na ny endriny. Raha mivavaka amin'ny fahatsiarovan-tena isika mihoatra noho ny hafa rehetra, ny vatantsika dia hovana haingana sy hazavana amin'ny mazava.
Ity no ampahany amin'ny filalaovana ny firaisana ara-nofo amin'ny fahazoana ny Fahalalahan'ny tena.
* Io firazanan'olombelona io dia voalaza ao amin'ny Baiboly ny tantaran'i Adama-Eva, talohan'ny nihinanany ny paoma fahalalana ary niteraka zanaka.
† Ity no niandohan'ny tantaran'ny phoenix, vorona masina miaraka amin'ny olona taloha indrindra. Voalaza fa ny phoenix dia niseho isaky ny miverimberina tsingerina iray ary handoro tena eo amboninny alitara, fa toy ny mitsangana matetika amin'ny lavenona tanora sy tsara tarehy. Izany no nanehoana ny tsy fahafatesany — amin'ny alàlan'ny fahaterahana indray. fehezin'ny lalànan'ny firaisana, ary ireo sela ao amin'ny vatantsika dia miasa mandraka ankehitriny.